Guardiola Oo U Duur Xulay Kooxaha Liverpool & Tottenham Ee Jooga Finalka Champions League. - Gool24.Net
Manchester City ayaa xalay ku guulaystay koobka FA Cupka si ay u dhamaystirto saddexleyda koobabka maxaliga ah ee dalka England.
Guardiola ayaa noqday tababarihii ugu horeeyay ee Man City ka caawiyay in ay hal xili ciyaareedk ku wada guulaysteen Premier league, EFL Cupka iyo waliba FA Cupka.
Laakiin markii uu Guardiola kooxdiisa u xaqiijiyay in ay koobkii saddexaad ee xili ciyaareedkan ku guulaysteen waxa uu u duur xulay kooxaha Premier league ee Liverpool iyo Tottenham.
Guardiola ayaa ku dooday in ku guulaysiga saddexda koob ee Premier League, FA Cupka iyo EFL Cupku ay ka adag yihiin in lagu guulaysato Champions League.
Inkasta oo uu Guardiola koobka Champions League ku soo fashilmay siddeedii sanadood ee ugu danbeeyay oo uu haystay kooxo awood badan oo Bayern Munich iyo Man City ahaa, haddana waxa uu sheegay in ku guulaysiga saddexda koob ka adag yihiin.
Man City ayaa xili ciyaareedkan dariiqii ugu sahlanaa u soo martay finalkii FA Cupka iyada oo dhamaan kooxaha waa wayn ee kale kaga nasiib badnaatay in ay kulamo kooxo heerka hoose ah ku soo aadeen.
Man City ayaa finalkii FA Cupka ee Watford u soo martay dariiqa ay kula soo ciyaartay kooxaha Rotherham, Burnley, Newport County , Swansea Brighton, iyo Watford oo ay FA Cupka ka qaaday.
Laakiin marka laga reebo finalkii EFL Cupka ee Chelsea ayay City dariiq fiican u soo martay finalkii EFL Cupka waxayna la so ciyaartay kooxaha kala ahaa Oxford Utd, Fulham, Leicester ,Burton Albion iyo Chelsea oo ay finalkii la ciyaartay.
Laakiin haddana Guardiola ayaa sheegay in saddexda koob ka adag yihiin ku guulaysiga koobka UEFA Champions League.
Guardiola oo isaga laftiisu qirtay in uu jecel yahay koobka Champions League ayaa yidhi: “Anigu waxaan jecelahay Champions League, laakiin in aad samayso (saddexda koob) ayaa ka adag ku guulaysiga Champions League”.
Hadalkan ayaa loo arkay in uu Guardiola ugu duur xulayo kooxaha Liverpool iyo Tottenham oo midkood uu ku guulaysan doono Champions League isla markaana uu ogyahay in ay hadhayn karto saddexda koob ee kooxdiisu hanatay.
Laakiin kooxaha Yurub ugu waa wayn ayaa dhamaantood koobka Champions League u arka koobka ugu adag ee ugu muhiimsan in lagu guulaystaa.
Tottenham ayaa Champions League u soo martay dariiq aad u adag iyada oo dhinac iskaga soo dhigtay kooxo ay ka mid ahaayeen Borussia Dortmund, Man City, Ajax iyo kooxihii heerka Groupyada oo ay Barcelona iyo Inter Milan ka mid ahaayeen.
Liverpool ayaa iyaduna meel adag u soo martay Champions League waxayna heerkii Groupyada kula ciyaartay PSG iyo Napoli halka kulankii FC Portu uu ahaa kan ugu salanaa waxayna soo martay ciqaabtii adkayd ee Bayern Munich iyo Barcelona.